Деревня Батубулан, Бали. Индонезия. Шопинг » Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Vohitra Batubulan
Ny tanànan'i Batubulan. Mpanamboatra vato any Bali
Amin'ity tanàna ity dia mety hahaliana anao:
Asa-tanana vita amin'ny vato izay amidy amina magazay sy anaovana galeria.
Ny tempolin'i Pura Puseh taloha.
Ny vokatra vato dia azo vidiana any amin'ny magazay, izay be dia be. Ny ankamaroan'izy ireo dia miorina eo amin'ny arabe lehiben'i Batubulan. Misy atrikasa akaikin'ny fivarotana. Ny mpanao asa-tanana dia mitantana vato eny an-kalamanjana na eo ambanin'ny tady.
Vohitra Batubulan avy amin'ny zanabolana
Ny tanànan'ny mpanao sokitra vato, Batubulan, dia miorina ao amin'ny Kabupaten Gianyar, avaratra andrefan'ny Denpasar amin'ny lalana mankany Ubud. Manodidina ny roapolo minitra amin'ny alàlan'ny bisikileta na fiara. Ity ambany ity ny sarintany.
Ao amin'ny tanàna, ny fivarotana lehibe indrindra dia eo amin'ny arabe. Fa, raha liana amin'ny fihenam-bidy ianao, dia misy dikany ny mirenireny eny lavitra, avy any afovoany, arabe. Any ianao dia afaka mahita zavatra izay tsy ho hitanao na aiza na aiza, ary miaraka amin'izay koa, amin'ny vidiny mora takatra.
adiresy: Batubulan 80582, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.620153, 115.261341
Ny fotoana mety indrindra hitsidihana ny tanànan'i Batubulan hiantsena dia ny andro fiandohan'ny herinandro, raha vitsy ny mpizahatany, ka noho izany dia tsy lafo ny vidin'ny magazay.
Sarin'ny asan'ny mpanao asa tanana avy amin'ny tanànan'i Batubulan
Dihy Bali any amin'ny tanànan'i Batubulan
Souvenir sy fanomezana avy any Bali
Vohitra Batubulan. Vokatra vato
Village Butubulan amin'ny sarintany
Vohitra Batubulan amin'ny sari-tany